Indlu enomtsalane e-Easterlittens kwifama yaseFrisian
UTamara - BELVILLA unezimvo eziyi-3484 zezinye iindawo.
Ikhaya leholide elihle emaphandleni asemaphandleni. Kumgangatho ophantsi kukho igumbi lokuhlala elibanzi kunye nekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo. Kumgangatho wokuqala kukho igumbi lokulala elibanzi elinebhedi ephindwe kabini, igumbi elincinci elineebhedi ezi-2 kunye negumbi lokuhlambela. Indlu ifanelekile ngokukhethekileyo kwintsapho yabantu be-4 kwaye ifikeleleke ngezitebhisi ezincinci.
Idolophana yase-Easterlittens ifumaneka ekudibaneni kweBolswarder kunye neFanekervaart. Umgama (15 km) ukuya eBolsward, Leeuwarden and Sneek uphantse ufane. Ezi zixeko zibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zenkcubeko kunye nezokutya. Entlakohlaza nasehlotyeni umoya uhlokoma ngeelapwings, godwits, curlews kunye neoystercatchers.
Ngaphandle kwendlu uya kufumana indawo enengca enembono yasemaphandleni apho unokonwabela ilanga. Iibhayisekile zinokuqeshwa kwindawo ukuba unqwenela ukujonga idolophu. Izilwanyana ezi-3 zingahlala nge-5 yee-euro ngesilwanyana ngasinye ngobusuku.
Iibhedi zenziwa xa ufika.
Uyilo: Umgangatho ophantsi: (ipaseji(indawo yomlilo yokuhombisa, indawo yokuhlala), Igumbi lokuhlala(iTV(isathelayithi), isitovu(igesi)), Ikhitshi(umatshini wekofu, indibaniselwano yemicrowave, ifriji-isikhenkcisi), indlu yangasese(indlu yangasese))
Kumgangatho woku-1: (igumbi lokulala(ibhedi enye, ibhedi eyodwa), igumbi lokulala(ibhedi enye, ibhedi yabantu ababini), igumbi lokuhlambela(ishawa, isitya sokuhlambela, indlu yangasese))
ukufudumeza(embindini), igadi, ifenitshala yegadi, iibhayisekile ziyafumaneka(zihlawulwa), ibhedi yabantwana
Izimvo eziyi-3 486